Bobby Lashley WWE Superstar Wareysi: WWE Champion Talks Goldberg Match - Ciyaaraha
Ganacsiga Marnaba Shakhsi Ahaan: Horyaalka WWE Bobby Lashley Ayaa Sheegay Inuu Leeyahay Xayawaan Kala Duwan Oo Galaya SummerSlam
Markii Champion -ka WWE Bobby Lashley uu bilaabay xukunkiisa hadda ee bishii Maarso ee sanadkan, ma fileynin inaan noqon doono buunbuunin ku saabsan waqtigiisii ​​horyaalnimada. Taasi waxay u ekaan kartaa wax la yaab leh iyadoo la tixgelinayo sida aan ula dhacay 2020 -kii xukunkii Hurt Business ee argagaxa Ceeriin . Orodkoodu wuxuu ahaa mid ka mid ah waxyaabihii ugu wanaagsanaa ee ku saabsanaa WWE intii lagu jiray karantiilnimada, guushiisii ​​weyneydna waxay ahayd dhammaadkii ugu fiicnaa ee sheekadaas iyo bilowgii xilligan foosha xun ee Lashley ku jiray 168 maalmood ee la soo dhaafay.
Awoodda Lashleys ee cadaawayaasha sida Drew McIntyre, Kofi Kingston, iyo nacas meel u dhow qof kasta oo lagu tuuray wadadiisa ayaa ahayd wax la yaab leh in la arko, laakiin sidoo kale waxay umuuqataa inay Lashley ku soo degtay isgoysyada Goldberg soo laabanaya, astaanta dib u soo noqon doonta si ay uga hortagaan ninka xagga buurta dusheeda si loo arko bal inuu baqayo iyo in kale. Like Siligga s Cumar, Lashley ha cabsan. Haddii uu doonayo kulankaas SummerSlam, waxaan siin doonaa ciyaartaas, Lashley ayaa dhowaan u sheegay Complex, laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ahay xayawaan kale. Hadda waxaan ahay xayawaan ka duwan
Complex wuxuu la qabsaday Lashley kahor muuqaalkiisa daaran Kulamada Dhakada ee Steve Austins Jabay (taas oo ku dhufatay Peacock Axaddii, Ogosto 15) iyo difaacii WWE Championship ee ka dhanka ahaa Goldberg ee SummerSlam Sabtidii Ogosto 21. Wadahadalkooda, WWE Championreflects wuxuu helay iska hor imaadkiisii ​​cajiibka ahaa ee Drew McIntyre ee WrestleMania 37, wuxuu sharxayaa sababta uu u qaatay loolanka Goldberg ee SummerSlam, wuxuu ka hadlaa xiriirka uu la leeyahay MVP, wuxuu daaha ka qaadaa halka uu dacwadaha ka helo, oo xitaa wuxuu ka hadlaa sidii uu ku galay ganacsiga IRL. Xushmee ALLOWGA marka uu qolka soo galo.
Waxaan dib u hadalnay bishii Maarso, isla markii aad ku guuleysatay horyaalnimada WWE. Maxay ahaayeen 160-kii maalmood ee ugu dambeeyay ee adiga kuu ekaa?
Waxay ahayd bahal, nin. Waxaan u maleynayaa in Ive ay hadda uun soo qaadanaysay kalsooni badan, waxaanan u malaynayaa in wax walba ay aad u fiicnaayeen. Aniga iyo MVP, waxaan ku jirnay liiska, waxaanna u malaynayaa in la isku raacsan yahay marka aad ii aragto horyaal, markaa waad fahmi doontaa waxa horyaal yahay. Anigu waxaan ahay xoog, waxaanan u malaynayaa in qof kasta oo imika imanaya oo doonaya inuu sameeyo taas awood u leeyahay inuu qaado tallaabada xigta, waa inay aniga i maraan. Taasina waa waddo weyn oo laga gudbo. Markaa ku guuleysiga horyaal adduunka hadda waa dhibaato aad u weyn oo aad u weyn.
Xayeysiin loogu talagalay dhacdooyinkaaga soo socda ee Kalfadhiyada Dhakada ee La Jebiyey, waxaad ku xustay in Drew McIntyre yahay, hadda, qofka kaa soo hor jeeda. Oo markii aan wada hadalnay horaantii sanadkan, waxaad xustay in ay noqon doonto wax la yaab leh haddii adiga iyo Drew aad kulan horyaalka ah ku heshaan WrestleMania 37. Ciyaartaasi way timid oo way tagtay. Dib noogu celi daqiiqadaas. Sidee bay ahayd, inaad awooddo inaad hesho daqiiqaddaas oo aad ka shaqaynaysay oo aad runtii sugaysay?
Waxaan u malaynayaa kaarka WrestleMania, waxaad raadinaysaa dhammaan noocyada kala duwan ee isku-dhafan. Aniga ahaan, waxaan u malaynayaa in WWE Championship ay tahay ciyaar aan la rumaysan karin maxaa yeelay waa kulan gaar ah. Xaqiiqda ah inaan fursad u helay inaan ka hor imaado Drew waxay muujinaysaa nooc ka mid ah legdinta. Maalmahan waa rag aad u tiro yar oo ordaya iyagoo samaynaya farabadan oo flips ah oo ku boodaya oo samaynaya dhammaan noocyada walxaha - taas oo aad u madadaalo leh oo aan jeclahay - laakiin dagaalku waa waxa aan ugu baahan nahay legdinta xirfadeed. Dagaalka. Waxaan u baahanahay dadka leh magacaas, markaad dhex marto madaarka, waad aragtaa, waxaadna tidhaahdaa, Nacala. Ninkaasi waa qof. Ma aqaan qofka uu yahay, laakiin waa qof.
Intaas ka hor, kahor WrestleMania, aad ayaan ugu farxay. Waxaan u tababarayay sidii waalli, wiil. Waxay ahayd waqti aad u wanaagsan. Ma aanan ogeyn waxa dhici doona, laakiin waan ogaa inaan diyaar u noqon doono. Hadda waxaan is -idhi mararka qaarkood waa inaad is -beddeshaa. Waa inaad ku tababarto dameerkaaga indhahaaga oo xiran oo aad ogtahay inaad wax u qabanayso ujeedo, taasina waa sida ay dareentay Drew. Taasi waa sida ay dareentay markii aan bannaanka joognay, oo waxaan haysannay daqiiqadda WrestleMania sababta oo ah waxaan dareemnay dagaalkaas. Ciyaartii ugu horraysay kadib hal sano oo ay ka maqnaayeen dadkii badnaa. Wax walba si fiican ayay isugu yimaadeen, waxaana u malaynayaa inay ahayd bandhig weyn.
Waxaad mar kale ku soo noqotaa waddada. Waa sidee habkaasi adiga kuu ahaa, oo si dhaqso ah uga gudbaya ThunderDome oo aad hortaagantahay WWE Universe?
Waddada mar kale. [ Qosol ] Waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha. Rag badan, markii aan bilownay waddada, waxaan ku fikiraynay, Ninyahow, diyaar ma u ahay inaan maro waddada? Jidhkaygu miyuu ku habboon yahay inuu sameeyo cayaaraha noocaas ah? Diyaar ma u ahay inaan ku boodo wadada? Ka dibna Ive ayaa la kharribay sannadkii la soo dhaafay. Waxaan xusuustaa in aan baabuur ku galay magaaladii ugu horreysay ee weynayd, oo waxaan dul marayay buundo. Waxaan eegay magaalada, oo waxaan la mid ahaa, Damn. Waan u xiisay tan. Waxaan ku jiray kaliya Planet Fitness, jimicsi joogto ah, oo qof baa la mid ahaa, Maxaad halkan ku samaynaysaa? Way jahawareereen.
Waa dareen wanaagsan, ninyahow. Waa dareen wanaagsan inaan bannaanka u baxo oo aan arko dadkii badnaa oo waalan oo ku farxay inaan ku arko maxaa yeelay waxaan kuu sheegayaa runta: Aad baan ugu faraxsanahay inaan arko iyaga. [Hadda waxaa jira] taageerayaal halkaas jooga oo qaylinaya, runtiina waan u kici karaa iyaga oo waxaan siin karaa shanta sare ama waxaan jeexi karaa mid ka mid ah astaamahooda haddii ay wax xun iga sheegaan. Waxaas oo dhan waan u xiisay, ninyahow, oo waxaan u malaynayaa in taageerayaashu ay tebayaan is -dhexgalkaas aan u baahan nahay. Isdhexgalka dadka ayaa lagama maarmaan u ah qof kasta oo ka tirsan guddiga. Waxaan u baahanahay bandhigyadan. Waxaan u baahanahay inaan yeelano bandhigyadan waaweyn, waxaanan u baahannahay inaan ku soo laabanno waddada. Waan jeclahay Ragga oo dhami way jecel yihiin, waxaanan u malaynayaa inay hadda uun ka fiicnaan doonto.
Waxaan moodayay inay tahay wax lagu qoslo markii Goldberg soo baxay oo yiri, waxaan doonayaa Bobby Lashley xaga SummerSlam, Bobby Lashleyna wuxuu ahaa sida, Nah, Im good. Waad sii socotaa. Hadda waxay joogeen meeshii uu khilaafku ka socday oo uu wiilkiisu socday Ceeriin Waxaad ku dhex martay tartan badan liiska, laakiin Goldberg waa nooc ka duwan xayawaanka marka uu ku soo laabto WWE. , sida Kofi Kingston ama Drew?
Haa Dhab ahaantii, maxaa yeelay waxaan arkay xoojinta; kama duwana sidii aan ku arkay Drew, laakiin waxaan ku arkay xooggiisa indhihiisa. Waan raacayaa wuxuu doonayay inuu sameeyo. Markan ayaan idhi, mar labaadna waan dhihi doonaa: Ixtiraam aad u weyn ayaan u hayaa Goldberg maxaa yeelay qof kasta oo koraya oo daawanaya Goldberg, daawanaya isaga oo ruxaya xadhkaha, dadka Jackhammer, dadka ka naxaya… wax baa jira: Isagu aniga uun ma noqon karo, waxaanan u malaynayaa inay taasi tahay inuu madaxiisa ka helo. Waxaan ula jeedaa, haa, waa astaan. Haa, waa Hoolka Caanka ah. Haa, ka waran wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeedho isaga, laakiin ha iga diidin.
Goldberg wuxuu leeyahay xulasho sannad kasta oo soo noqnoqda laba jeer oo ka qaado horyaalnimada adduunka, ka qaadista horyaalnimada WWE, ka dibna ka fogaada. Laakiin taasi ma dhici doonto.Sidaa darteed markan wax yar ayaan ka xumaaday. Markii hore, waxaan la mid ahaa, Oh, Goldbergkeeda. Waxay ii ahayd nooc la yaab leh. Nooceeda waa wax qabow, laakiin markaa waxay bilowday inay quusto maxaa yeelay nimankan ayaa wejigayga galaya. Waxa uu ahaa nasiib MVP ma jirin, sababtoo ah ma haysto dad aad u badan oo wejigayga sidaan ugu socda. [Dadku] had iyo jeer [waydii] su'aashaas, Dadku ma kuugu yimaadaan baarka oo wejigaaga ma galaan? Maya, ma yaqaaniin Oo hadday sameeyaan, arrimuhu way dhacaan. Oo Goldberg ayaa markan wejigayga soo gaadhay, wax walbana waa dhow yihiin inay dhacaan.
Laakiin ma taqaan waxa? Haddii uu doonayo ciyaartaas SummerSlam, waxaan siin doonaa ciyaartaas, laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ahay xayawaan kale. Hadda waxaan ahay xayawaan ka duwan
Waan jeclahay xoogahan. Hagaag, waxaan dhihi doonaa waan ka xumahay inaan arko Hurt Business oo koox ahaan, halbeeg u kala ah. Laakiin waxaan u malaynayaa inay macno leedahay maxaa yeelay waxaad awoodday inaad dib u fiirsato. Qayb ka mid ah isbeddelkaas adiga iyo MVPgetting ayaa dhab ahaa oo waxaad tidhaahdeen, Haye, waa inaan jarnaa macno -darrada oo aan sii wadnaa jidka. Xiriirkaaga MVP sidee buu ahaa? Ma ka xoog badan tahay sidii hore?
Haa, nin. Taasi waa saaxiibkay Aniga iyo MVP, dib ayaan u laabannaa, mar walbana sidaas ayaan ahayn. MVP waa qofka… Oh, haa, wax weyn baad samaysay Waxaad u muuqatay mid wanaagsan, iyo wax walba oo la mid ah. Taa kama helo isaga. Waxaan ka helaa fikrado daacad ah isaga. Maxaad u malaynaysaa inaan u baahanahay? Hagaag, waxaan qabaa [waa inaad] ka taxaddartaa tan. Waxaad u baahan tahay inaad tan hagaajiso. Waad ogtahay, in kulankaas, aad aad u seegtay ciyaartaada. Waxaad u baahan tahay inaad isaga garaacdo. Jooji qoob -ka -cayaarka ... Taasi waa noocyada uu oran doono, waana jeclahay taas maxaa yeelay taasi waa dhab, waxaana u baahanahay dad igu hareeraysan oo socda si ay run iigu noqoto. MVP waa qofkaas. MVP ayaa xaqiijin doonta haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba.
Jidka aan joogno wuxuu na siinayaa fursad aan baabuurka ku dhex wadno, taasina waa [qayb] legdinta oo aadan iibsan karin. Xitaa kama hadalno. Taasi waa waaya -aragnimadeena shaqsiyeed ee ah inaan ku safro adduunka oo dhan iyo inaan waalanno kaladuwan ka dhicin magaalooyin kala duwan oo dhan. Waxyaabaha dhacaya maalin kasta laga bilaabo garoonka diyaaradaha ilaa meelaha kiraynta baabuurka ilaa huteelada ilaa bandhigyada. Waxaa jira noocyo kala duwan oo sheekooyin kala duwan oo aan hayno. Isagoo raacaya, waxaan ku kaftannaa alaabtan, ka hadal waxyaalahan, fuushan mawjadan. Waxaan ula jeedaa, aniga iyo isaga waa nooc ka mid ah dabada dambe ee xirfadahayaga, iyo madadaalo u leh inaan awoodo inaan sameeyo waxyaalo waaweyn oo sidaas oo kale ah, ugu dambayntii, shan, 10, sannado hoos u dhaca wadada markaan hawlgab noqdo, waxaan rabaa inaan noqo Goldberg oo mar walba soo noqnoqota oo wax yeelo u geysata dadkaas qaarkood. Taasi waa waxa Hurt Business ku saabsan yahay. Ganacsiga Hurt weli wuu nool yahay, ninyahow.
Daawashada fiidiyowga laga soo bilaabo Isniintii la soo dhaafay, waxaan la yaabay Ive waligeey tan hore ma weydiin. Adiga iyo MVP xaqiiqdii waxaad timaadeen inaad labisan tihiin si aad u soo jiitaan. Ma leedahay nin suudh leh? Ma dhaxashay nin suudh ah mawjadan?
Xaq Xaq Maya, waxaan ku leeyahay Denver meel aad u fiican. Waxaa loo yaqaan Dharka Dharka . Dhab ahaantii, MVP, Shelton, iyo Cedric ayaa halkan u soo duulay. Ragga runtii qabow.
Markii ugu horreysay ee aan tan bilaabay, waxaan u sheegay waxaan doonayo. Waxaan ahay nin koray Waxaan qaatay laba shahaado jaamacadeed. Waxaan helay carruur. Waxaan hayaa ganacsiyo badan oo aan maamulo. Waxaan haystaa shirkad hanti ma guurto ah. Waxaan sidoo kale ku biiray dhowr maalgashi oo kale. Markaa waxaan ahay ganacsade, laakiin noloshayda oo dhan dameer baan laadayay. Taasi waa waxa Ganacsiga Hurt uu ku saabsan yahay, waana sidaan rabay inaan ku muujiyo TV -ga. Miyey ahaayeen wiilal nafsaddeenna u abuuray sanado badan, welina halkaan u soo dagaallamayay.
sida loo sameeyo tirooyinka shukulaatada moodeelka
Maan fahmin inta aad ka gashay meheradda ka baxsan giraanta. Goorma ayaad gashay hantidaas ma -guurtada ah?
Hagaag, asal ahaan markii aan sameeyay, waxay ahayd intii aan ordayeygii ugu horreeyay. Isagoo fadhiya gorilla xiga Gerald Briscoe, wuxuu ahaa mid ka mid ah wiilashii i galiyay meheradda. Waxay u badan tahay inay ahayd sannad gudaheed, waxaana qaadanayey lacag. Briscoe ayaa dhinac ii jiiday, oo wuxuu tegey, Maxaad ku sameyneysaa lacagtaada? Waxaan la mid ahaa, Hagaag, waxaan iibsaday baabuur, [Qosol] wuuna tagaa, fadhiiso Soo gal halkan oo fadhiiso, wuu ila fadhiistay, wuxuuna iiga sheekeeyay hantidiisii ​​ma guurtada ahayd. Wuxuu yiri, Waxaad u baahan tahay inaad iibsato hanti ma -guurto ah. Haddii aadan haysan wax kale oo aad hadda ku boodday, hubso inaad iibsato hanti ma -guurto ah maxaa yeelay meheradani weligeed kuguma sii jiri doonto. Waqtigaagu wuu kooban yahay, waad taqaan. Waqtiga qof walba wuu kooban yahay. Wuxuu kaliya yiri halkaas ka bax oo hubi inaad aasaaska u dhisto naftaada iyo qoyskaaga iyo carruurtaada, oo waxaan la mid ahaa, Waa hagaag. Taasi waa qabow Waan ka mahadcelinayaa taas. Kadib waxaan iibsaday gurigaygii ugu horeeyay. Waxay u ekayd guri $ 50,000 oo doolar ah, ku rid ilaa $ 4,000, aniguna waxaan ku rogay sidii $ 95,000.
Marka waxaan bilaabay inaan lacag sameeyo bilowgii. Wixii markaas ka dambeeyay, waxaan bilaabay in aan soo qaado qaar kiro ah markii aan raacay oo aan isku dayay in aan dhiso faylalka tacliimeed. Waxaan sameynayay dakhli kiro oo ku filan bishii oo aan ku daryeeli karo biilashayga oo aan awoodo inaan ku noolaado qaab nololeedka aan doonayo inaan ku noolaado, oo waxaan gaaray heerkan, sidaa darteed hadda aad ayaan ugu faraxsanahay. Aad bay u weyn tahay in lacagtu soo gasho, oo aan awoodo inaan weli sameeyo waxa aan samaynayo, jidhkayguna weli waa caafimaad qabaa, laakiin waxaan u diyaargaroobayaa maalmaha roobka.
Kulamada Dhakada ee Steve Austins Jabay: Bobby Lashley ayaa hadda ku qulqulaya Peacock.
keega cuntada malaa'igta oo leh strawberry recipe